FAQs - Shandong Kingoro Machinery Co, Ltd.
Inguva yakareba sei yako pellet muchina webasa?
A: Hatigone kukupa chaiyo nguva, asi mimwe michina yemaperembudzi yakatengeswa muna2013 ichiri kushanda nemazvo izvozvi.
Inguva yakareba sei sevhisi yezvipfeko zvayo?
A: Rin'i kufa: 800-1000 maawa.The chinotenderera: 800-1000 maawa. Roller goko: maawa 400-500.
Iyo rin'i kufa ine matanda maviri, kana rimwe dura rasakara, shandura kuti ushandise imwe dura.
Ndezvipi zviri nani maererano nezveSZLH560 nhevedzano uye SZLH580 nhevedzano?
A: Ose ari maviri mhando anovimbiswa. Vamwe vatengi vanosarudza kune iyi mhando, uye vamwe vatengi senge imwe mhando.
Unogona kuisarudza zvinoenderana nemamiriro ako ezvinhu.
Kana uchifunga nezvemutengo, SZLH560 nhepfenyuro iri kuponesa, asi SZLH580 ine kuita kwakanyanya kugadzikana, uye hupenyu hwakareba pamwe nekudhura.
Pane chero chinodikanwa pane izvo zvinhu zvekugadzira pellet?
A: Hongu. Wood sawdsut ndiyo inonyanya kushandiswa materia kugadzira biomass pellet. Kana imwe hukuru hukuru huni tsvina kana marara ekurima, inofanirwa kupwanywa kuita zvidimbu zvidiki, zvisingasviki 7mm. Uye iyo hunyoro iri 10-15%
Ndeapi matambudziko akajairwa kana uchishandisa muchina wepellet?
A: Zvakasiyana kwazvo. Asi usazvidya moyo nezvazvo, isu tine yakanakisa mushure-yekutengesa sevhisi. Unogona kuwana mhinduro mukati memaawa maviri neemail, nhare, kutungamira kwevhidhiyo, kana kunyange injinjini sevhisi yekumhiri kana zvichidikanwa.
Inguva yakareba sei yehutano vimbiso?
A: Mishini yese ine warandi yegore rimwe, asi isingasanganisi zvikamu zvekusiya.
Ndingaitewo here ini asi muchina wepellet chete, hapana mimwe michina inotsigira?
A: Kana muchina mudiki wepellet, hongu, hongu, chete pellet muchina wakanaka.
Asi kune yakakura yekukwanisa kugadzirwa, tinokurudzira kuti utenge iyo yeyuniti michina yekushandisa kuti uve nechokwadi chekushanda kwemuchina
Nzira yekukatanura uye kuunganidza iyo mhete uye kufa?
A: Kana mainjiniya edu akakuisira muchina, anozodzidzisa vashandi vako panzvimbo. Kana iwe usingade yedu yekuisa sevhisi, iwe unogona zvakare kutumira mushandi wako kufekitori yedu kune chitima.Tine zvakare akajeka mavhidhiyo uye mushandisi bhuku rekukubatsira iwe kuzviita.
Imhandoi yemafuta ekuzodza anoshandiswa mumuchina wepellet?
A: L-CKC220 ye gearbox, uye yakanyanya tembiricha inodzivirira komputa lithium base grease yemafuta pombi.
Pane here zvimwe zvakakosha zvinhu zvinofanirwa kubhadharwa zvakanyanya kutarisirwa kwekutanga kekushandisa muchina mutsva?
A: Iwe unogona kutarisa kumusoro kwese informaion iri mushandisi bhuku.
Ndokumbira utarise, Chekutanga, kumuchina mutsva, hapana kana mafuta mairi, uye unofanira kuwedzera mafuta anodiwa pamwe chete nemafuta epombi anotevera bhuku racho.
Chechipiri, ndapota rangarira kukuya iyo die yepellet muchina nguva dzese pamberi- uye mushure mekuishandisa.
UK hurumende kuburitsa nyowani biomass strate ...
Ungatanga sei nemari diki mu ...
Vachikuya muchina wehuni, Wood Crusher, Bhandi rinotyairwa Hammer Mill, Nyundo Mill NeDutu, Mhuka Dyisa Pellet Mill, Bindu Wood Chippers,